I-china Resin plugging hole Microvia Immersion silver HDI enabakhiqizi bemishini ye-laser nabaphakeli | Kangna
I-PCB ejwayelekile ye-FR4
Ngesandla Esiqinile-flex Board
Ceramic IBhodi Isekelwe
Heavy yethusi Board
Ibhodi ephezulu ye-Tg
ibhodi eqinile-eguquguqukayo enesiphetho se-ENEPIG
Competitive PCB Umkhiqizi
Resin wokufaka imbobo Microvia Ukucwiliswa isiliva HDI nge laser imishini
Uhlobo lwento: FR4
Ububanzi besikhala / isikhala esincane: 4 mil
Min imbobo usayizi: 0.10mm
Iqedile ukujiya kwebhodi: 1.60mm
Iqedile ukujiya kwethusi: 35um
Umbala wesifiva sesolder: oluhlaza okwesibhakabhaka
Isikhathi sokuhola: izinsuku eziyi-15
Kusukela ngekhulu lama-20 kuye ekuqaleni kwekhulu lama-21, imboni yebhodi yesekethe ye-elekthronikhi idla isikhathi sokuthuthuka kwezobuchwepheshe, ubuchwepheshe be-elekthronikhi buthuthukiswe ngokushesha okukhulu. Njengemboni yebhodi yesifunda ephrintiwe, kuphela ngentuthuko yayo evumelanisiwe, engahlala ihlangabezana nezidingo zamakhasimende. Ngomthamo omncane, okhanyayo futhi omncane wemikhiqizo kagesi, ibhodi lesifunda eliphrintiwe lithuthukise ibhodi eliguquguqukayo, ibhodi eliguquguqukayo eliqinile, ibhodi lesifunda lomgodi elingaboni eliyimpumputhe njalonjalo.
Ukukhuluma ngezimbobo ezingaboni noma ezingcwatshwe, siqala ngemultilayer yendabuko. Isakhiwo sebhodi lesifunda esinamasendlalelo amaningi sakhiwa isifunda sangaphakathi nesekethe elingaphandle, futhi inqubo yokubhola nokufaka izinsimbi emgodini isetshenziselwa ukufeza umsebenzi wokuxhumeka kwangaphakathi kwesekethe yesendlalelo ngasinye. Kodwa-ke, ngenxa yokwanda kobuningi bomugqa, imodi yokupakisha yezingxenye ivuselelwa njalo. Ukuze kwenziwe indawo yebhodi lesifunda ikhawulelwe futhi ivumele izingxenye ezengeziwe neziphezulu zokusebenza, ngaphezu kobubanzi bomugqa omncane, ukuvula kwehlisiwe kusuka ku-1 mm we-DIP jack ukuvula kuya ku-0.6 mm we-SMD, futhi kwehliswa kancane kwaba ngaphansi kuka 0.4mm. Kodwa-ke, indawo engaphezulu isazohlala abantu, ngakho-ke kungakhiwa umgodi wembobo nomgodi oyimpumputhe. Incazelo yomgodi ongcwatshwe nomgodi oyimpumputhe imi kanjena:
Umgodi odabula phakathi kwezendlalelo zangaphakathi, ngemuva kokucindezela, awubonakali, ngakho-ke awudingi ukungena endaweni engaphandle, izinhlangothi ezingenhla nezingezansi zomgodi zisengxenyeni engaphakathi yebhodi, ngamanye amagama, zingcwatshwe ibhodi
Isetshenziselwa ukuxhumana phakathi kwesendlalelo sendawo nengqimba eyodwa noma ngaphezulu yangaphakathi. Uhlangothi olulodwa lomgodi lungakolunye uhlangothi lwebhodi, bese umgodi uxhunywe ngaphakathi kwebhodi.
Ubuhle bebhodi lomgodi ongaboni futhi wangcwatshwa:
Kwezobuchwepheshe bomgodi ongagobhozi, ukusetshenziswa komgodi oyimpumputhe nomgodi ongcwatshwe kunganciphisa kakhulu usayizi we-PCB, kunciphise inani lezendlalelo, kuthuthukise ukuhambisana kwe-electromagnetic, kukhulise izici zemikhiqizo kagesi, kunciphise izindleko, futhi kwenziwe nomklamo sebenza ngokulula nangaphezulu. Ekudizayinweni nasekucutshungweni kwendabuko kwe-PCB, ukungena emgodini kungadala izinkinga eziningi. Okokuqala, bahlala endaweni enkulu esebenzayo. Okwesibili, inani elikhulu lezimbobo ezisendaweni eshinyene nalo lidala izithiyo ezinkulu ekuxhumaneni kocingo lwangaphakathi lwe-PCB enezingqimba eziningi. Lezi zimbobo ezingena emigodini zihlala esikhaleni esidingekayo sokwenza izintambo, futhi zidlula kakhulu ebusweni bokuphakelwa kwamandla kanye nocingo lwentambo yomhlabathi, oluzoqeda izici zempedance yongqimba lwentambo kagesi yomhlabathi futhi lubangele ukwehluleka kocingo lwaphansi lokuphakelwa kwamandla ungqimba. Futhi imishini ejwayelekile yokubhola izophindeka izikhathi ezingama-20 kunokusebenzisa ubuchwepheshe bomgodi ongagobhozi.
Langaphambilini 6 ungqimba impedance control rigid-flex board with stiffener
Olandelayo: I-3 oz solder mask efaka i-ENEPIG ibhodi lethusi elisindayo
Ikheli:Isitezi sesi-4, Isakhiwo A, ohlangothini lwesibili lwaseNtshonalanga, iWest zheng 2nd Road, iShajiao Community, iHumen Town, iDongguan, iGuangdong, China.